Bayern Munich oo ku ciil baxday FC Port, kagana adkaatay 6-1 | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Bayern Munich oo ku ciil baxday FC Port, kagana adkaatay 6-1
Bayern Munich oo ku ciil baxday FC Port, kagana adkaatay 6-1
Kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda ku gumaaday FC Porto oo marti ugu hayad, waxayna Bayern guushan ku gaadhay 5:1. Bavaria ayaa qaybtii hore ee ciyaartaba dhulka ku jiiday kooxda martida u ahayd ee Porto, waxaana goolasha daadka ah udhaliyay, Thiago Alcántara ,Jerome Boateng, Thomas Muller, Xavi Alonso oo min hal gool dhaliyay iyo Robert Lewandowski oo laba jeer shabaqa soo taabtay. Porto ayuu goolka kaliya udhaliyay Jackson Martínez . Guushan ayaa Bayern Munich ka caawisay inay dhinaca kale udhigto guuldaradii ay kulankii hore kala soo kulantay Porto, waxayna ugu jawaabtay xasuuq iyo dhibaato wayn. Bayern Munich ayaa iska xaadirisay afar dhamaadka Champions Leaque-ga.
Bayern Munich ayaa Allianz Arena ku soo dhawaynaysay kooxda Porto oo kulankii hore cashar ugu soo dhigtay garoonkeeda isla markaana guuldaro 3:1 ahayd Baeyrn dhabarka u soo saartay, waxayna kooxda Guardiola doonaysay inay dhinaca kale u dhigto natiihadii niyadjabka lahayd ee todobaadkii hore soo gaadhay.Garoonka ayay jamaahiirta Bayern si aan caadi ahayn u soo buux dhaafiyeen.
Bayern Munich ayaa kulankan laga doonayau inay ugu yaraan laba gool ku guulaysato si ay u soo noolayso rajeeda ahayd inay u soo baxdo wareega sideed dhamaadka Champions Leaque-ga, laakiin kooxda Bavaria oo xili ciyaareedkan garoonkeeda rekoodh fiican ku leh ayaa doonaysay inay guul ka gaadho Porto.Gardiola ayaa shaxdan la soo shirtagay.
Bayern Munich ayaa ciyaarta ku bilaabatay qaab ciyaareed aan layaableh waxayna dardaaran ku qabeen inay ciyaarta go’aan ka gaadhaan qaybta hore isla markaana ay goolal la yimaadaan si xaalku ugu sahlanaado qaybta danbe ee ciyaarta. waxay u muuqtay in dardaarankii ay qabeen ciyaartoyda Bayern ay markiiba kaga dhabeyeen waxayna fursada ugu halista badnayd heleen daqiiqadii 11 aad markaas oo Lewandowski uu birta u garaacay Porto.
Dadaalka Bayern Munich ayaan waqti dheer qaadan waxayna goolka furitaanka heleen daqiiqadii 14 aad iyada oo uu gool madax ah udhaliyay Thiago Alcántara kaas oo ka faa’iidaystay kubbad uu ka helay Juan Bernat, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Bayern Munich xili horeba hogaanka ciyaarta ugu qabatay. Thiago ayaa kulankii labaad goolkiisii labaad ka dhaliyay Porto.
Bayern Munich ayaa markale dardar xoogan ku sii socotay waxayna dadaal badan kadib goolka labaad heshay daqiiqadii 22 aad, waxaana markan gool kale oo madax ah usaxiixay Jerome Boateng kaas oo isaguna ka faa’iidaysatay kubbada fiican oo uu ka helay Holger Badstuber, markan ayay ciyaartu noqotay 2:0 ay Bayern Munich hogaanka ku dheeraysatay. Halkaa ayayna Bayern Munich ku soo celisay natiijadii kulankii hore waxayna sidaa ku heshay fursada ay ku soo bixi lahayd.
Laakiin Bayern Munich may ahayn koox doonaysay inay la timaado kaliya goolasha ay ku soo bixi karto balse waxay u haraadanayn inay xili horeba ciyaarta disho isla markaana ay Porto dhulka ku jiido si ay ugaga aarsato guuldaradii kulankii lugta hore.
Daqiiqadii 27 aad ayay Bayern Munich heshay goolkeeda saddexaad waxaana markale gool madax ah udhaliyay Robert Lewandowski kaas oo markiisa ciyaarta u badalay 3:0 ay Bavaria hogaanka ugu raaxaysanayso. Lahm ayaa si cajiib ah dhinaca midig uga soo ciyaaray wuxuuna kubbada fiican u sii dhiibtay Muller kaas oo isaguna kubbada gaadhsiiyay Robert Lewandowski oo goolka ku dhamaystiray qaab qurux badan. Waqtiga ciyaarta oo aan gaadhin 30 daqiiqo ayay Bayern heshay saddex gool oo darandoori ah.
Ciyaarta ayaa noqotay mid dhinac kaliya ka socotay, waxayna Bayern ahayd kooxda daqiiqad kasta goolal laga filanayay. Daqiiqadii 36 aad ayuu Thomas Müller kooxda Porto goolka afraad ugu qubeeyay, wuxuuna kooxdiisa udhaliyay goolka farxadeeda oo dhamaystiran u soo celiyay.Muller ayaa goolkan ku dhaliyay kubbad uu ka helay Thiago Alcántara, wuxuuna goolka Porto ka toogtay meel u jirtay 30 yards, waxaana qalad wayn ku lahaa goolhayaha Porto oo u muuqday inuu xili horeba niyad jabay, waxayna markan natiijada ciyaartu noqtay 4:0 ay Bayern Munich ku dhibaataynayso kooxda martida u ahayd ee Porto oo kala daadsanayd kulankan.
Daqiiadii 40 aad ayuu Robert Lewandowski dhaliyay goolkiisa labaad iyo gooka shanaad ee Bayern Munich kaas oo ahaa goolka dhulka la galay kooxda martida ahayd.qaybta hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid ay Porto ciyaarta markhaati kaliya ka ahayd halka kooxda Guardiola ay ahayd kooxda dhul gariirka ku abuurtay Porto.
Pep Guardiola ayaa ciyaartoydiisa ka helay wixii uu ka doonayay, wuxuuna u muuqaday mid farxadu ay ka badatay kadib markii uu kulankii hore niyadjab kala soo kulmay kooxda Porto. Porto ayaan u muuqan inay ahayd kooxdiis todobaadkii hore Bayern soo karbaashtay. Guardiola ayaa farxad darteed surwaalkiisa iska dilaaciyay.qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 5:0 ay Bayern Munich ku burburisay rajadii Porto.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayayba ciyaarta natiijadeedu ahayd mid go’aan laga gaadhay 30 kii daqiiqo ee ugu horaysay. waxayna ciyaartu noqotay mid inta badan gaabis ah.Porto ayaa ugu danbayn daqiiqadii 73 aad heshay goolkeeda kowaad ee kulankan waxaana udhaliyay Jackson Martínez, waxayna ciyaartu noqotay 5:1 ay waliba Bayern hogaanka ku raaxaysanayso.
Daqiiqadii 87 aad ayay Porto casaan laga siiyay Marcano kaas oo kaadhkiisii labaad qalad halis ah ku galay Thiago, waxana daqiiqadiihii ugu danbeeyay ku dhamaysatay 10 ciyaartoy. Bayern Munich ayaa markii goolka laga dhaliyay markale weerar ku bilawday difaaca Porto, waxayna daqiiqadii 88 heshay goolka ay ciyaarta ku soo gabagabaysay waxaana ciyaarta soo xidhay Xabi Alonso oo kooxdiisa udhaliyay goolka lixaad, wuxuuna markiisa ciyaarta ka dhigay 6:1 ay Bayern Munich ku xabaashay Porto.Alonso ayaa goolka ku dhaliyay kubbada loo dhigay goobta uu xididag Porto qaladka ugu galay Thiago wuxuuna Alonso si fiican kubbada uga dulqaaday ciyaartoyda Porto halka uu goolhayuhu awoodi waayay inuu badbaadin sameeyo.
ugu dambeen ciyaarta ayaa ku dhamaatay 6:1 ay Bayern Munich ugu soo baxday wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga waxayna iyada iyo Barcelona noqdeen labada kooxood ee ugu horeeyay ee u soo baxay wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga.